सबै आधुनिक कार एक शक्तिशाली प्रकाश उपकरण संग सुसज्जित छन्। तर गलत तरिकाले टाउको र पनि अधिक प्रकाश समायोजित बलियो भन्ने तथ्यलाई सक्छ प्रकाश बीम आपतकालीन खतरा, आगमन कार मद्यपानोत्सव हुनेछ। उल्टो अवस्था - सडक को रोशनी को अभाव। यो वा त्यो चरम जोगिन गर्न, कार मालिकले हेडलाइट्स कसरी समायोजन गर्न जान्नुपर्छ।
headlamp समायोजन आफूलाई दायरा प्रतिस्थापन गर्दा, उदाहरण को लागि आवश्यक प्रदर्शन , क्सीनन दीपक हेडलाइट्स वा स्थापना protivotumanok मा दीपक प्रतिस्थापन गर्दा। यो प्रक्रिया उपयुक्त छ र अगाडि एक्सल जीर्णोद्धार।
तपाईं रोशनी कसरी समायोजन गर्न, वा तपाईं उपयुक्त स्थान विशेषज्ञहरु SRT, समाधान विशेष उपकरणको मद्दत, सही र चाँडै संग जो समस्या "गलत" प्रकाश सम्पर्क गर्नुपर्छ छैन थाहा छैन भने छैन।
त्यहाँ रोशनी समायोजन कसरी गर्ने भन्ने बारे कुनै प्रश्न छ जसको लागि कार मालिक, तपाईं मानक योजना सामान्यतया यो प्रक्रिया प्रदर्शन गर्न प्रयोग गरिन्छ भनेर थाह छ। यो एकदम सरल छ कुनै विशेष उपकरण आवश्यक र धेरै समय लाग्न गर्दैन। यो प्रक्रिया को लागि मुख्य अवस्था समतल ठाडो पर्खाल (अडान रूपमा प्रयोग) र पर्खाल अगाडि स्थित एक सपाट तेर्सो मंच छन्। कम्तिमा7मीटर को दूरी बाँकी वाहन को अगाडि र पर्खाल बीच भनेर तेर्सो क्षेत्र लम्बाइ, कम्तिमा 10 मिटर हुनुपर्छ। यो पनि चिनो चक वा Masking टेप मा शेयर आवश्यक छ।
तपाईं रोशनी समायोजन अघि, nakachany टायर जाँच गर्न निश्चित हुन। यसले अक्षहरूमा को एक मा "अधिभार" को अभाव मा सुनिश्चित हुनुपर्छ। निलम्बन तत्व एक overestimation वा सवारी साधनको underestimation सडक माथि अग्रणी, महत्वपूर्ण कमजोरीहरू छैन पर्छ। ट्यांक मा पेट्रोल को राशि यसको क्षमता बारे 1/2 हुनुपर्छ।
(यो बाट 5-7 मीटर को दूरी मा) को ठाडो पर्खाल अगाडि कार राखे। मार्क दुई जो हेडलाइट्स केन्द्र, र एक साथ पालन गर्नु पर्छ तीन अंक, पर्खाल मा - मिसिन को सन्तुलन को केन्द्र। हामी एक लाइन तिनीहरूलाई जडान गर्नुहोस्। यो मुनि, 5-12 सेन्टीमिटरको दूरी मा, दोस्रो लाइन को तार गर्न समानान्तर। पहिलो downlink 22 सेमी भन्नुभयो देखि विस्तार र समानान्तर तेस्रो लाइन प्रदर्शन। तिनीहरूलाई मार्फत हामी तीन कडाई ठाडो लाइन, जहाँ रोशनी र कार केन्द्र केन्द्र उल्लेख थियो ठाउँमा आयोजित गर्नुपर्ने खर्च।
डूबा बीम मा हेडलाइट्स गर्नुहोस्। ज्योति स्थान को शीर्ष बीचमा तेर्सो रेखा मा स्थित हुन अनिवार्य छ। त्यसपछि दायाँ headlamps सडक curb को रोशनी प्रदान गर्ने इच्छुक मार्ग जाँच गर्नुहोस्। यो दोस्रो तेर्सो रेखा संग ठाडो लाइन को चौराहे को बिन्दु परे जानैपर्छ।
हेडलाइट्स यो योजना अनुरूप छैनन् भने, यो आवश्यक छ (प्रकाश बीम निर्दिष्ट मान मेल भनेर) सही स्थिति मा रोशनी स्थापना गर्न (स्क्रू समायोजन को माध्यम द्वारा)।
नियम, हेडलाइट्स दुई समायोजन स्क्रू संग सुसज्जित छन्। पहिलो ढलान समायोज्य दायरा (प्रकाश बीम को माथिल्लो सीमा एक तेर्सो रेखा मा सेट गरिएको छ) छ। दोस्रो स्क्रू उठाएको वा हल्का प्रवाह को दायाँ-हात भाग कम छ।
शेवरलेट ओर्लान्डो। समीक्षा
प्रतिस्थापन गर्ने सानो घर आफ्नै हात फिल्टर
रेडिएटरको हटाउने बिना ओवन निस्तब्धता। कसरी हटाउने बिना स्टोभ गर्मी डुब्नु धुन?
सर्वश्रेष्ठ जापानी खेल कार: एक सिंहावलोकन, विनिर्देशों, मोडेल र समीक्षा
एसईओ-rewriting: केवल फाइदा
मनपर्ने खुबानी: उपयोगी गुणहरू
अध्यापन: विषय, वस्तु र कार्यहरु। अध्यापन विषयको गर्दछ ...
फुकेत हवाई अड्डा - पश्चिमी थाईल्याण्ड को हावा गेट
क्रिसमस सही मा अनुमान कसरी?
को ख्रुश्चेव मा बेडरूम डिजाइन: आधारभूत सिद्धान्तहरू
GOY - अपमान हो?